Hlanganisa ityala - iRaymin Display Products Co, Ltd.
Uyilo lomboniso wale pallet, umthengi ebengenazo iimfuno ezicacileyo ekuqaleni, kwaye into ebesinayo kuye sisikhokelo seMigangatho yokuPakisha yeWalmart. Umthengi ebengenalo nofifi lokuba angazibonisa njani iimveliso zeqela labo. Baxelele nje into ezakuboniswa kule yunithi.
Njengoko besineqela leenjineli sizazi kakuhle iimfuno zeWalmart Display, Ngokukhawuleza siphuhlise ukunikezelwa kwe3D kwisalathiso sabo.
Emva kweembaleki ezininzi zokujonga isiKhokelo kunye nokuqinisekisa kunye nomthengi, ekugqibeleni saqinisekisa ubungakanani, kwaye sathumela iitemplate zomgca wokufa kumthengi kuyilo lobugcisa. Umthengi uhlala efuna ukuthatha iintsuku ezi-5 ejikeleze ukugqiba uyilo lobugcisa. Umsebenzi wobugcisa kufuneka ube yi-AI okanye ifayile yePDF Emva kokufumana umsebenzi, siza kujonga ngokukhawuleza ukuba ngaba kukho iifonti ezingekhoyo, kwaye siya kuthumela kwakhona imvume kumthengi ukuba ayiqwalasele okokugqibela ngaphambi kokuhlekisa ngesampulu.
Emva kokuba umthengi ebonelela ngobugcisa bokuyila, inkampani yethu yenza isampulu yombala ukuba umthengi aqinisekise. Njengoko iWalmart inesidingo esiphakamileyo kumbala, babonelela ngemvume yokuba silandele umbala xa sisenza isampulu. Umzi-mveliso kufuneka ulandele umbala kufutshane kangangoko kwisampulu yombala ebonelelweyo.
Sisebenzisa ngokungqongqo inkqubo yolawulo lwemibala ye-GMI ngexesha lokuprinta ukuqinisekisa uzinzo lombala kwinkqubo nganye yokushicilela ibhetshi. Oku akuncedi kuphela ukuba umbala wecandelo ngalinye ulingane kakuhle, kodwa ulawule nokwahluka kombala phakathi kokutsha kunye nokushicilela okudala.
Umshicileli olungileyo ngumgangatho olungileyo we-controler kumanyathelo ngamnye wekhadibhodi yokubonisa imveliso yobunzima. Asikhathalelanga kuphela ukuprintwa, kodwa sikhathalele nokuba ngaba izinto zayo zazomelele ngokwaneleyo ukubamba ubunzima bemveliso. Isampulu emhlophe inokusebenza kakhulu ukuba umthengi enze uvavanyo. Sinikezela ngeesampulu ezimhlophe simahla, kunye noku-odolwa kwangaphambili kwesampulu emhlophe kulwakhiwo olulandelayo nako kwakusebenza.
Iqela lemveliso linokujonga ukuba yonke into ichanekile ngokufanelekileyo. Banokukhawulezisa ukufumanisa ukuba kukho naziphi na iimpazamo apha. Siza kudibanisa umboniso ukuze siqiniseke ukuba yonke into ichanekile, ngaphambi kokuba ihanjiswe kumthengi.